गर्भावस्थाको बखत पेट
हप्ता को लागी गर्भावस्था
गर्भावस्था को संकेत
गर्भावस्थाको th 36 औं हप्ता, के हुन्छ, संवेदनाहरू, अल्ट्रासन्ड्स, भ्रुणको विकास पेटको विकासले पेट दुख्छ
तपाईंको लागि, perferent 36 ओबस्टेन्डर हप्ताको अन्त्य हुने गर्भावस्थाको अन्त हुन्छ, जुन बच्चा उनको आमाको पेटमा बढ्दै जान्छ, जन्मका लागि तयारी गर्दै। चाँडै नै समय आउनेछ जब तपाईं आफैं छेड्नुहोस् र तपाईंको क्रम्ब राख्नुहुन्छ।
यसै बीचमा, तपाइँ तपाइँको बच्चाको प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ, भ्रुणको pays 36 हप्ता गर्भावस्था, all 36 हप्ता गर्भावस्था, प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ।
feeal विकास गर्भावस्था मा हप्ता
यद्यपि आमाको पेटमा अहिले स्वतन्त्र रूपमा उडान गर्न गाह्रो छ, उसले आफ्नो रोक्दैन, कहिले काँही आमाको लागि धेरै पीडादायी हुन्छ।
यस मामिलामा, बच्चाको अत्यधिक गतिविधिले बच्चाले अनुभव गरेको असुविधाहरूलाई संकेत गर्न सक्छ। बच्चाको यस्तो गतिविधिले अक्सिजनको अभाव, वा आमाको शरीरको असहज स्थिति हुन सक्छ।
यदि बच्चाको आन्दोलनको धेरै घण्टा हराइरहेको छ भने - यो एक डरलाग्दो संकेत हो, र आमा डाक्टरमा हतार गर्नु पर्छ।
औसत, बच्चा र गर्भावस्थाको about 36 हप्तामा 36 36 वटा आन्दोलनको चट्टानहरू 12 घण्टामा कम्तिमा 10 पटक महसुस गरिन्छ। र तपाईंको गर्भावस्थाको अन्त सम्म, 'मोरको आन्दोलनका लागि मूर्त र असभ्य र असभ्य र असभ्य को संख्या घट्छ।
गर्भावस्थाको 36 36 हप्ताहरूमा बच्चाको तौल 2,600 ग्राम भन्दा बढी हुन सक्छ, जबकि बच्चाले 47 47 सेन्टीमिटरसम्म फैलिएको छ, र अझ बढी।
महिलाको शरीरमा परिवर्तनहरू
गर्भावस्थाको अन्त्यबाट धेरै महिलाहरू अनिद्राको गुनासो गरे। तर तपाईंलाई अब पूर्ण रूपमा आराम चाहिन्छ! हामी रातमा कम तरल पदार्थ पिउने सल्लाह दिन्छौं, निद्राको लागि एक सुविधाजनक मुद्रा पत्ता लगाउनुहोस्, अतिरिक्त प्याडहरूसँग समातिएपछि, ्गलाई एक मसाज गर्न आग्रह गर्नुहोस्।
यस अवधिमा, त्यस्ता अप्रिय गर्भकानीहरू लक्षणहरू, जस्तै झाडापखाला वा कब्ज जस्ता मतली, सास फेर्दै। अब गर्भाशय आन्दोलनमा र मूत्राशयमा राख्छ, अधिक अक्सर तपाईंलाई शौचालयमा प्रस्तुत गर्दछ।
नभुल्नुहोस् गर्भावस्थाको 36 36 हप्ताको 36 36 हप्तामा तपाइँ contrendered छ। यस अवधिको अवधिमा, यौन मार्गले आगामी जन्महरूको लागि तयारी गरिरहेको छ, त्यसैले तिनीहरूमा संक्रमणको खतरा बाहिर निकाल्नु पर्छ।
हामी माइनिया मैत्री र व्यक्तिगत मारिना कन्डललाई मियामीमा हाम्रो बच्चालाई मिल्छ। उनीसँग मस्को वा रीगामा जन्म हुने अवसर पाएको थियो।
नमस्कार। पत्रुस बाट। मेरो नाम दानियल हो। मियामी केरको साथ मियामी पहिलो बच्चामा आउनुहोस्। अ English ्ग्रेजी मलाई थाहा छ, एक साथी अमेरिकामा बस्छिन्, बच्चाको जन्ममा जानकारीले अध्ययन गरेको छ र उनीहरूले हामीलाई धेरै महँगो लाग्न सक्छ। क्रममा दुई पटक तिर्नु हुँदैन र एक पेशेवर कम्पनीको एस्कॉर्टको साथ जानको लागि स्नायुहरू खर्च नगर्न।
<< p> अमेरिकामा उडान गर्दै, म आशावादी थिएँ, यद्यपि मेरो इको-गर्भावस्था गाह्रो थियो, 1 हप्ताको लागि 12 हप्तासम्म, र डाक्टरहरू, सबै तौल, मलाई उडान अनुमति दियो। Miailare को लागी धन्यवाद, जसले मलाई मस्कोमा मद्दत गर्यो। हामी मेरो जेठो छोरीलाई विवाह गर्यौं ताकि हामी सँगै थियौं, 'नुहाए र विश्राम लिए।
अमेरिका मा, म पहिलो पटक थियो, र सत्य बताउन, म त्यहाँ जन्म दिन धेरै डराएको थियो। सबै कुरा पूर्ण रूपमा अपरिचित हुन्छ, म व्यावहारिक रूपमा भाषा जान्दिन, मसँग साथीहरू र आफन्तहरू छैनन्।
Paterater बाट sateraum बाट sacrum बाट लम्बाई - लगभग cm 33 सेन्टीमिटर - लगभग 255500 s रिपोर्ट (धेरै जसो) मास र भ्रुण आकार। जे होस्, बच्चाको वजन र लम्बाई बढ्न सक्दछ (वंशानुगत र बाह्य कारणले निर्भर गर्दछ)।
जन्म हुनु अघि, केवल -5--5 हप्ता बाँकी छ। सायद तपाईं घबराइ हुनुहुन्छ कि बच्चा समय अघि जन्मेको हुन सक्छ। तपाईंको प्रेमिका वा आफन्तहरू बीच, त्यहाँ अपेक्षित मानिसहरूलाई अपेक्षित व्यक्तिहरू हुन पक्कै त्यहाँ छन्, र सबै ठीकठाक भयो।
तपाईंले 11 देखि 1 13..5 किलोग्राम र अर्को महिनामा पहिले नै रलो रलोमा रत्न हुनुभयो। त्यहाँ कुनै अनौठो कुरा हुनेछैन कि तपाईको वजन अब जन्ममा परिवर्तन हुनेछैन।
अब तपाईंको बच्चाको वरिपरि पानी जम्मा गर्ने अधिकतम रकम वरिपरि छ। निम्न हप्ताहरूमा, बच्चा बढ्दै जान्छ। एकै साथ तपाईको शरीरले बच्चाको वरिपरि जम्मा गर्ने केही रकम घटाउँदछ र अगाडि बढ्ने कम सम्भावना प्रदान गर्दछ। तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि बच्चाले कम सार्न थालिन् र यति सक्रिय रूपमा छैन। केही महिलाहरू डराउँछन् कि उनले पूर्ण रूपमा सार्न बन्द गरे वा ऊ सामान्य रूपमा सर्दैन।
<< p> यस हप्ताबाट तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई साप्ताहिक रूपमा देख्नु पर्छ। यस समयमा धेरै फलहरू टाउकोको टाउकोमा अवस्थित छन्। यद्यपि, बच्चाहरूको %% चश्माको स्थिति ओगट्नुहोस्। यसलाई बीरियम वा पेल्विक पूर्वावलोकन भनिन्छ। यस अवस्थामा, बच्चाको जन्ममा केही समस्याहरू सम्भव छन्, यद्यपि आवश्यक छैन। प्राय: अक्सर ओब्स्टेट्सले भविष्यको आमालाई चेतावनी दिन्छ कि सिजेरियन क्रस सेक्सको रिसेन्सलाई वास्तविक विकल्पहरूको रूपमा मान्नुपर्दछ।
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन चरणहरू सच्याउने मौका दिन्छन्। र अब उनीहरूको अनुप्रयोगको लागि समय आएको छ।
सबै स्पष्ट "खराब" को साथ यो प्रविधिको साथ, यसले प्राय: सकारात्मक परिणाम दिन्छ! यसको सार निम्न अनुसार छ: एक विशेषज्ञ जो यो विधि स्वामित्वको साथ "मानसिकपूर्वक विश्वस्त पार्छ" बच्चा एक महिलाको बेचमा राखिएको डाक्टरलाई पछ्याउन। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको महिला गर्भाशय र अगाडिको पेटको भित्ताका मांसपेशिको मांसपेशिको प्रतिरोधको अभाव हो।
मिठाईहरू प्रयोग गरीयाँ, आटा भाँडा र पशु फ्याटहरू दिनको मात्रामा सीमित गर्नुहोस्;
ध्यानपूर्वक उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं खाना पकाउनुहुनेछ - तिनीहरू ताजा र मौसमी हुनु पर्छ। <
तयार खाना स्टोर केवल फ्रिजमा;
सुत्नु अघि कम्तिमा तीन घण्टा सम्म हुनु पर्छ। / LI> :
अब तपाईं गर्भावस्थाको year 36 हप्तामा हुनुहुन्छ। यस बिन्दुमा बच्चाको अनुमानित वजन22700 ग्राम हो, बृद्धि 45 45--47 सेमी हो। बच्चाले आनुवंशिक सुविधाहरूमा निर्भर गर्दछ, ताकि निर्दिष्ट संख्याहरू विचलित हुँदैनन्, त्यसैले त्यो सानो विचलनहरू विचलित हुन्छन्।
गर्भावस्थाको about 36 हप्ताको उमेरको बच्चाको विकासको मुख्य लक्ष्य फ्याट टिश्यु जम्मा गर्नु हो। यस समयमा, बच्चाले 200-2500 ग्राम वजनमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ। अब मोटो मुख्यतया पेट र ब्याकस्टमा स्थगित हुन्छ।
बच्चाको छाला सहज र मखमल भएको छ, एक रमाइलो गुलाबी रंग छ - रक्तपाहिक रत्नहरू, एडिपिज ऊतकमा। नरम तोप लगभग सबै बेपत्ता पारिए। प्राथमिक लुब्रिक्सको मात्रा घट्छ - एक पात-जस्तो पदार्थ जसले स्पिन्डल पानीको प्रभावबाट छालालाई बचाउँछ। तर टाउकोमा कपाल गहन रूपमा बढ्दै छ।
पूर्ण सुविधाहरू पूर्ण रूपमा गठन हुन्छन्। कान, नाक, आँखा, लिनिन, चिन, गाला - सबैले आनुवंशिक रूपमा राखिएको बाहिरी बाहिर प्राप्त गरेको छ। अर्को अल्ट्रासाउन्डमा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि बच्चा को जस्तो हुनेछ।
सबै आन्तरिक अंगहरू र प्रणाली गठन र कार्य गरिएको छ। अब तिनीहरू केवल बढ्दो र सुधार गर्दै छन्।
<< p> सबै महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूले बच्चाको जीवनलाई समर्थन गर्दै दिमागमा काम गरिरहेको छ। हृदयले 1 1400 WT को गतिमा धड्कन्छ। / मिनेट, कुराकानी र परिचित स्ट्रोकको प्रतिक्रियामा गतिमा। पूर्ण रूपमा फोक्सोको रूपमा। भविष्यको पाचनका लागि आवश्यक सबै रस र इन्जाइमहरू पाचिएटी पथमा उत्पादन हुन्छन्। मिर्गौलाले दैनिक milling00 मिलीबरको उमेरमा उत्पादन गर्दछ। केटाहरू नियंतिहरूले कम पारिएका छन्, केटीहरूको ठूलो सेक्सी ओठ सानो छ।
गर्भावस्था हप्तामा महिलाको भावना
गर्भाशयको उचाई - 36 36 सेन्टीमिट स्ट्यान्ड गर्नुहोस् यदि यो हुनु भन्दा पहिले भएको भए, बच्चाको टाउको थोरै कम हुन्छ, सानो पेल्विसका प्रवेशद्वार थिच्दै। यो मांसपेशी, लिगामेन्ट र स्नायुहरूमा प्रेस गर्दछ, बच्चा जन्माएको मुख्य शर्बिंगरलाई प्रोत्साहित गर्दछ - पेटको तल र तल्लो पछाडि एक धारिलो दुखाइ। दुखाइ मासिक धर्म, आवधिक रूपमा समान छ, राम्रो चरित्र लगाएको।
भ्रुणको बहिष्कारको लागि धन्यवाद, हार्दिक हराउँछ। धेरै आमाहरू मनाए कि तिनीहरू सास फेर्न र खाने सजिलो भयो।
क्याल्सियमको कमीको कारण मांसपेशी क्रम्प अझै सम्भव छ। यदि आवश्यक छ भने डाक्टरले क्याल्सियम र म्याग्नियम समावेश गर्दछ, र इच्छित डोज चयन गर्दछ।
गर्भावस्थाको 36 36 औं हप्ता - समय को गणना सुरु हुन्छ। , 2, 2, 1, 1. जीवनमा सबैभन्दा मनमोहक र जीवनको अपेक्षित घटना कहिले पनि कुनै पनि समयमा आउन सक्छ। अनुभव र उत्साह छोड्नु पर्छ। ज्ञान र आत्मविश्वास र तपाईंको बच्चाले तपाईंलाई सबैभन्दा सम्बन्धित क्षणमा मद्दत गर्दछ, हराउन, जम्मा गरेर र यो गाह्रो परीक्षाको सामना गर्नुपर्दैन।
के भइरहेको छ?
यो स्वामित्वको साथ जीवनका लागि सक्रिय रूपमा तयारी गर्दैछ: उनको मुखमा पुग्दा सबै कुराको लागि निल्नुहोस् र शेषस्थान आन्दोलनहरू बनाउँछ। त्यसैले ऊ आफ्नी आमाको छातीबाट खाँदै आफूलाई जित्न प्रशिक्षण दिन्छ र यस संसारमा उसको पहिलो सास कमाउनुहोस्।
एडिपिज ऊतकको बनेका कारण अनुहारको तह फोर्रिंग गर्दछ र बच्चाको शरीर गोलो हुन्छ। बच्चाले उसको शरीरलाई जस्तै कुचल बनाउँदछ।
सफ्ट पर्याप्त नरम छ, किनकि बच्चाको जन्म को समयमा यो जेनेरिक मार्ग सफलतापूर्वक पार गर्न को लागी केहि बत्तील हुन सक्छ।
के महसुस भएको छ?
<< p> पछिल्ला केही हप्ता तपाईंले द्रुत गतिमा तौल प्राप्त गर्नुभयो, अन्तरिक्षको अभावको भावना देखा पर्न सक्छ। यस्तो देखिन्छ कि ढोकाहरू नजिक छन्, क्लिनिकमा र प्रवेशद्वार एकदम साँघुरो र व्यक्तिहरूको लागि निर्विवाद छैन। सास फेर्न बढी गाह्रो हुँदै जान्छ, र कहिलेकाहिँ यो पर्याप्त हावा जस्तो देखिन्छ। सबै कुराको कारण एक गर्भाशय हो जुन पसलहरूमा उठ्छ। प्रबुद्ध समृद्धिबाट 35 35 सेन्टीमिटबाट र नाभी 1 cm सेन्टीमिटरबाट र नाभी 1 cm सेन्टीमिटरबाट
तर गर्भावस्थाको th 36 औं र th 38 औं हप्ता बीचको अवधिमा, बच्चाको टाउको दाँतको टाउको दाँतमा प्रवेशद्वारमा गएको थियो। एकै साथ तपाईले फोक्सोमा दबाबमा कमी भएको महसुस गर्नुहुनेछ - सास फेर्ने र सास फेर्छ। यद्यपि यो ध्यान दिए कि कहिले पनि सोर कहिलेकाहीं जनहरू नहुन्जेल दयालु नहुन्जेल। प्राय: प्राय: दोहोरिएको बच्चाको समयमा यो हुन सक्छ।
गर्भावस्थाको th 36 औं हप्तादेखि, डाक्टरसँग एक बैठक साप्ताहिक रूपमा हुन्छ। यदि तपाईंसँग केहि शंका, चिन्ता, नगर्ने प्रश्नहरू - यो समय हो कि डाक्टरसँग सबै उत्तरहरू र शान्त रहनको लागि!
एक ओबस्ट्साट्रिक्साइक्यानशास्त्रीको रिसेप्शनमा पहिले नै मानक हुनेछ: रक्तचाप, गर्भाशय, पेट, पेट, आवाज, तौल, पेट, आवाज, वजन, पेट, पेट, पेट को मात्रा। तपाईलाई थाहा छैन के संग यस्तो केहि। प्रयोगशाला अध्ययनहरूको बारेमा अधिक हाम्रो लेखबाट फेला पार्न सकिन्छ, जुन thoustersonds औं हप्तामा विश्लेषण गर्न समर्पित छ।
प्रसूति अस्पतालको झोला 100% को लागी तयार हुनुपर्दछ। 6th औं ओबस्ट्रन्ट हप्ता th औं क्यालेन्डर महिना हो, र त्यसकारण बच्चा जन्माउने समय कुनै कुनामा बाहिर छैन। यद्यपि, बच्चा देखा पर्नेछ जब उसले आफैंले निर्णय गर्छ!
घटनाहरूको कुनै पनि मोडको लागि तयार हुनु राम्रो हो, सकारात्मकलाई ट्युन गर्नुहोस्। झोला, कागजातहरू र सहि मनोवृत्तिले तपाईंलाई भ्रमित गर्न अनुमति दिँदैन यदि बच्चा मुश्किलले देखा पर्न भने मुश्किलले हतार गर्यो भने।
गर्भावस्था the 36 हप्ता फेस्टस र भावनाहरूको विकास: तपाईंको वजन प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईंले सिफारिस गरिएको वजन 11 देखि 1 kil किलोग्राम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईंसँग गर्भावस्था अघि मध्यम शरीर मास सूचकांक थियो भने। आशा गर्नुहोस् कि तपाईंले अझै पनि एक हप्ताको मिति समाप्त हुनु अघि हप्तामा 30000 ग्राम प्राप्त गर्नुहुनेछ, जुन प्राय: तपाईंको बच्चाको बृद्धिमा जान्छ।
तपाईंको गर्भाशय तपाईंको श्रोणि नजिकै जान्छ। यदि तपाईं अहिले जन्म दिनुहुन्छ भने, तपाईंको बच्चालाई दुई हप्ताको लागि समयपूर्व ठानिन्छ, र यसलाई तपाईंको चुनिएको अस्पतालको नरकको गहन उपचारको विभागमा राख्नु पर्छ।
गर्भावस्ता गर्भावस्था भनेको के भइरहेको छ? - गर्भावस्था को 33 36 हप्तामा रूपान्तरणको लागि सम्बन्धित छ, तर बच्चा जन्माउने संकेतहरू चिन्न सक्ने क्षमता छ। Proint प्रेरणाको गर्भावस्था हरबिजरको पहिलो: यदि तपाईंले बच्चा जन्माउनुभएको कक्षा भ्रमण गर्नुभएको छैन भने, तपाईंको डाक्टरलाई सहयोगको लागि खोजी गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईको डाक्टरलाई चेतावनी दिनुहोस् र तुरून्त आपतकालीन कोठामा सम्पर्क गर्नुहोस्, यदि तपाइँ निम्न मध्ये एक हुनुहुन्छ भने:
माथिको साधारण लक्षणहरू मात्र होइन, तर लक्षणहरू पनि हुन् जसले गर्भावस्थाको जटिलता दर्शाउँछ, जस्तै पूर्वाभ्यासहरू र प्लेसेन्टाको साथ समस्याहरू।
यदि तपाईं कुनै लक्षण, पुरानो वा नयाँ, डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहुन्छ भने। यहाँ केहि विशिष्ट लक्षणहरू छन् जुन तपाईलाई event 36 हप्ता लाग्छ।
DESSESS को छोटोता गयो
आमा-नयाँज्ञहरूले याद गर्नेछन् कि उनीहरूको ट्यूबक्सले पेल्वी क्षेत्रमा खस्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईंको प्रकाश र डायाफ्रासमसँग अधिक हावा अवशोषित गर्न अधिक ठाउँ हुन्छ, त्यसैले तपाईं अब सास फेर्न सजिलो हुन्छ। तपाईंले गत महिनाहरूमा भन्दा राम्रो खान सक्नुहुन्छ, पेटमा केहि दबाब हटाउन सकिन्छ। तर सायद तपाईसँग यस चरणमा खानाको लागि भोक छैन।
PLEVISE दुखाइ र असुविधा
गर्भावस्थाको 35 35 feet हप्ता गर्भावस्था: जब तपाईंको पेट स्ट्रेन्स र तपाइँ बच्चा जन्माउनुहुन्छ, यो ब्रास्टोन चिकन वा झूटा संकुचन हुन सक्छ। तिनीहरू नरम र अनियमित छन्, तीव्रता वा फ्रिक्वेन्सीमा वृद्धि नगर्नुहोस् र स्थिति परिवर्तन गर्दा। यदि तपाईं यो सुनिश्चित हुनुहुन्न कि यो ब्रेकस्टन HICKS हो, तपाईंको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।